မိုးစက်ပွင့်: May 2010
When you like this garden to nurture;
I will love to enjoy the flowers.
When you like to play the music;
I will love to listen with my heart to it.
When you like to taste the red wine withatoast of bread;
I will love to prepare candle lights on the table set.
The love and life we share,
The tear and sadness we bear,
The hundred kisses and thousand hugs we take together;
You, being my closest friend and sibling,
Offering firmest shoulder to lean on and warmest hand to hold on;
You, being my dearest husband, who will be by my side forever.
Let me whisper, only for your ears,
You know, my dear?
At every second, I love you more and more....
Please be my lifelong partner in our glorious future;
(Dedicated for our 3rd anniversary :P )
Posted by Me at 09:314comments: Links to this post
ဟော- အခုတော့ တွေ့ပြီလေ....
Posted by Me at 12:13 1 comment: Links to this post
၂၀၀၈ မှာ မွှေတဲ့ နာဂစ်
၂၀၀၉မှာ မိုးမရွာတဲ့ အညာ
တူးပို့ နဲ့ ပျော်နေသူတွေ အသက်မရှူ မျက်ဖြူဆိုက်
နူရာဝဲစွဲ လဲရာ သူခိုးထောင်း
ရာထောင်ချီတဲ့ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ ပြာကျ
ကူကယ်ရာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား ဈေးအထမ်းသမားလေးရဲ့ ဘ၀
သြော် - ဆိုးလှပါဘိ
ရင်မှာ မချိပါပြီကော ...လေ..။
ဘ၀တွေက အဆင်းခက်တဲ့ တွင်းနက်နက်
(၂၄.၅.၁၀ မင်္ဂလာဈေး မီးကြီး နှင့် ဈေးအလုပ်သမား လက်လုပ်လက်စားတွယ်ရာမဲ့ဘ၀များအား ၀မ်းနည်းစွာဖြင့်-)
"photo credit: Nyi Lynn Seck.( http://blog.nyilynnseck.com/)
Posted by Me at 17:21 No comments: Links to this post
Posted by Me at 18:223comments: Links to this post
ခရီးသွားနေတာရယ် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာရယ်ကြောင့် စာမရေးဖြစ်ပေမဲ့ ဘလော့မှ အနည်းငယ်သော သူငယ်ချင်းများကို သတိရနေပါတယ်။ လောလောဆယ် ဘာမှ မရေးဖြစ်သေးတာမို့ လောလောဆယ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကလေးတွေပဲ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးပါရစေ... ယူသွားပါနော် :D
ပန်းကလေးတွေ မြတ်နိုးတတ်တဲ့ အပြုံးပန်း အတွက် ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေတဲ့ ပိတောက်ဝါလက်ဆောင် .....။
မမရှင်လေးအတွက် ပုဇွန်ထမင်းကြော်၊ နှမ်းလေးနဲ့ ကြက်သွန်ကြော်ဖြူးထားတယ်။ မွှေးမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်။
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ စူးနွယ်လေး အတွက် ပုဇွန်သုပ်...ချဉ်ချဉ်လေး...။ ဟဲဟဲ- တို့ချက်တာမဟုတ်ဘူး (အထင်ကြီးသွားမှာစို့လို့)..။ ညီမလေး ချက်တာပါ။
ဗဟုသုတရစရာ စာတွေအရေးကောင်းတဲ့ ဇီဇ၀ါ အတွက် ပိန်းနဲသီး တစ်အုပ်တစ်မ...။ မှည့်တော့ မမှည့်သေး။
သဲထိတ်ရင်ဖို တွေရေးတတ်တဲ့ ကလူထွေးကြီးအတွက် လိုဏ်ခေါင်းကြီးတစ်ခု ........။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းက ဆောက်ထားတာ ဆိုပဲ...။ ပေ၃၀၀လောက် ရှည်မယ် ထင်ပါတယ်။
ချော (အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်)အတွက် ကျောက်စိမ်းတုံးသယ်ဖို့ သင်္ဘောတစ်စီး .............။ ရှယ်ယာဝင်ခွင့်ပြုမလားဟင်...။
မမ မကျည်းတန်အတွက် မြစ်ပြင်ကျယ် ရှုခင်း ....။ ညနေခင်း ဆည်းဆာအလှပါ။
တဖက်သတ်ခင်ရတဲ့ မအယ်ဇီ၊ မမိုးချိူသင်း၊ မတူးတူးသာ၊ မကိကိ ၊ မငယ်နိုင၊် မရွှေဇင် တို့ တူတူစီးဖို့ ရွက်လှေကလေးတစ်စီး။ (နိုင်ပါ့မလားတော့ မသိဘူး)
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး မိုးစက် ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်.။ (လောလောဆယ် လျိူထားလိုက်ဦးမယ်) ဓါတ်ပုံ လက်ဆောင်လေးတွေ ကြိုက်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်......။ နောက်မှ ထပ်ရေးဦးမယ်နော်.....။
ရိုးလွန်းတာ့ “အ” သတဲ့။ ကျွန်မတို့နယ်ရုံးကလေးတစ်ခုက နေ့အကူ ၀န်ထမ်းကလေး အမည်က ကိုဘကြိုင်တဲ့။ အသက်ကတော့ သုံးဆယ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ သူ့ဇာတိက အညာရွာတစ်ရွာကဖြစ်ပြီး လူက တော်တော်လေး ရိုးပါတယ်။ အမှားတွေ မကြာခဏ လုပ်တတ်လို့လည်း သူ့ကို “နီကိုရဲ” လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ နီကိုရဲ ဇာတ်ကောင်လိုဘဲ သူက သေးသေးကွေးကွေး ပုပုပျပ်ပျပ် ကလေးပါ။ သူ့ရဲ့ ရယ်စရာ အမှားကလေး တစ်ချိူ့ မျှဝေချင်လို့ပါ...။
တစ်နေ့ကျတော့ တခြားရုံးသားတွေနဲ့အတူတူ ကိုဘကြိုင် ရန်ကုန် သွားရတယ်။ ရန်ကုန်ဆိုတာ သူ့အတွက်တော့ မျက်စေ့လည်စရာကြီးပါ။ ရုံးရှေ့ကို ရောက်တော့ (တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူတစ်ယောက်ထဲ) အော်တိုမက်တစ်မှန်တံခါးရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ချိန် ဗြုံးကနဲ တံခါးပွင့်သွားတယ်။ သူနည်းနည်းတော့ လန့်သွားတယ်။ ဘေးဘီဝဲယာကြည့်တော့ တံခါးဖွင့်သူလည်း မရှိ။ သရဲများခြောက်တာလား ဆိုပြီး နောက်နည်းနည်း ဆုတ်လိုက်တော့ တံခါးက ပြန်ပိတ်သွားတယ်။ ခဏစောင့်ပြီး လူသူလေးပါး ချောင်းဖို့ ကပ်သွားတော့ တံခါးက ပြန်ပွင့်၊ သူ နောက်ဆုတ်တော့ တံခါးက ပြန်ပိတ်နဲ့ ဖွင့်ချည် ပိတ်ချည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေတာ။ နောက်တော့ သူဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပုဆိုးပြင်ဝတ်လိုက်တယ်။ အသာ တံခါးအနားကပ်တဲ့ပြီး ပွင့်လာတဲ့တံခါးကြားကနေ အချိန်မဆိုင်း ( ညပ်မိမှာစိုးလို့ ) တစ်ဟုန်ထိုး ပြေးဝင်ခဲ့တော့တယ်.........
သူတည်းတဲ့ ဟိုတယ် ရောက်တော့လည်း (ဒီတစ်ခါတော့ အဖေါ်ပါတယ်) ဓါတ်လှေခါး နားမှာ လူတွေ စုစု စုစု ရပ်နေတာ မြင်သတဲ့။ အဖေါ်က ခလုပ်နှိပ်ပြီး ၀င်တော့ သူလဲ လိုက်ဝင်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ပေါင်ချိန်စက်ကြီး လို့ ထင်ပါသတဲ့။ သြော်- ဟိုတယ်ပေါ်တက်ဖို့ ပေါင်လည်းချိန်ရသကိုး လို့ တွေးမိတယ်။
ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ရေချိူးဖို့ ကြွေကန်တွေ ဘာတွေနဲ့ ဆိုတော့ သူမသုံးတတ်ပြန်ပါဘူး။ ဟိုခလုတ် ဒီခလုတ်တွေလည်း ဓါတ်လိုက်မှာစိုးတော့ မထိရဲ မပြုရဲပေါ့။ နောက်ဆုံး အိမ်သာဘေးက ပိုက်ခေါင်းလေးနှိပ်ကြည့်တော့ ရေထွက် လာတယ်လေ...။ ဟွန့်- ဒါပဲဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး အိမ်သာပိုက်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြန်းပြီး ရေချိူးခဲ့ပါသတဲ့...။
သူကရိုးပေမဲ့ သူနဲ့သွားတဲ့ အဖေါ်တစ်ချိူ့ကဆန်းတော့ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ အနှိပ်ခန်း ရောက်သွားပါသတဲ့။ ကောင်မလေးတွေ ခြေထောက်စနှိပ်ကတည်းက ယားလွန်းလို့ မနည်းကြိတ်မှိတ်သည်းခံနေရတာ။ သူ့ကို ထိုင်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ခါးကြောဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့( အထိမခံနိုင်အောင် ယားတတ်သူပီပီ) “အောင်မလေး- သောက်ခွေး“ အော်လဲအော် ရုန်းလဲရုန်းနဲ့ ကောင်မလေး ရင်ခွင်ထဲ ၀ုန်းဆို ပစ်ကျသွားပါလေရောတဲ့။ ကောင်မလေးတွေက စိတ်ဆိုးပြီး သူတို့အားလုံးကို ပြီးအောင်မနှိပ်ဘဲ နှင်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
သူ့အဖြစ်ကို ကျွန်မတို့က တဟားဟားရယ်ကြတော့ သူက ပြောပါသေးတယ်။
အံမယ်- ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က ပိုဆိုးသေးတယ်။ သူက လယ်လေး ခြံလေးပိုင်တော့ ဒါတွေရောင်းပြီး နိုင်ငံခြား (မလေးရှား)သွားဖို့ပြင်တာ။ ပွဲစားကလည်း ညွန့်နေအောင်ပြောပြီး ငွေတောင်း ထားတာ။ ရန်ကုန်မှာ သူ့ကို အကျအနပြင်ဆင်ပြီး လေဆိပ်ခေါ်သွားတယ်။ လေဆိပ်ရောက်ရင် လာကြိုလိမ့်မယ် မပူနဲ့..... လို့လည်း ပွဲစားက မှာလိုက်သေးတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်လဲ တင်ပေးလိုက်တယ်။ စီးရင်းစီးရင်း လေယာဉ်ပျံ အပေါ်စီးကနေ ရှူခင်းတွေကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားပုထိုးတွေ အများကြီး မြင်ပါသတဲ့။ မလေးရှားကလည်း ငါတို့ အညာလို ပါဘဲလား လို့ တွေးကောင်းနေတုန်းမှာဘဲ - လေယာဉ်မယ်က ကြေငြာပါတယ်။ မကြာမီ “ညောင်ဦး လေဆိပ်”ကို ဆင်းသက်ပါတော့မယ်ရှင် - တဲ့။
သြော် သူတို့က မျိူးနဲ့ ရိုးနဲ့ “အ” တာကိုး ..............
Posted by Me at 16:314comments: Links to this post
Posted by Me at 10:524comments: Links to this post
Posted by Me at 10:573comments: Links to this post